သက်သက်လွတ်သမားဖြစ်ရခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ။ တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနှင့် ကုသခြင်းကို အားပေးပါ - Hello Sayarwon
အသီးအရွက်စားသူဖြစ်လာရသည့်အကြောင်းအရင်းများစွာရှိနိုင်သည်၊ ကျန်းမာရေးပြသာနာ ရောဂါကာကွယ်ခြင်း ဘာသာရေးအမြင် တိရစ္ဆာန်ကောင်းကျိုးအတွက် သို့မဟုတ် အခြားသူကိုမသတ်ပဲ စားလိုသည့်စိတ်စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ လတ်ဆတ်သောအသီးအနှ့ရသော ဟင်းအမျိုးအစားမျိုးစုံရခြင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားသူ၏ကောင်းကျိုးများကိုသိလာခြခင်းတို့ကြောင့် လူအတော်များများက အသီးအရွက်မှရသောအစာကိုဟင်းအဖြစ်ရွေးချယ်လာကြသည်။
ပထမဆုံး အသီးအရွက်သည် အာဟာရပြည့်ဝစေရုံမျှမက နှာတာရှည်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သောအန္တွာရာယ်ကိုလည်းလျော့ချပေးနိုင်သည်။ တိရစ္ဆာန်အဆီတွင် ကိုလက်စတောများစွာပါဝင်ပြီး သင်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အခြားသောလေ့လာချက်များအရ အသားစားခြင်းသည် အစာအိမ် အူ ဆီးကျတ် မုန့်ချိုအိတ်ကင်ဆာကိုပိုဖြစ်စေကြောင်းလည်းတွေ့ရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အပင်မှရသောအစာများက သင့်အား နှလုံးရောဂါ ကင်ဆာ အဝလွန်ခြင်း ဆိးချိုနှင့် အခြားနှာတာရှည်ရောဂါတော်တော်များများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ လေ့လာမှုတော်တော်များများက အသီးအရွက်စားပါက ဆီးချိုထိန်းရာတွင်ကူညီနိုင်ခြင်း ဖြစ်နှုန်းကို တစ်ဆခွဲခန့်လျော့ချပေးနိုင်ခြင်းတို့ကိုတွေ့ရသည်။
လတ်ဆတ်သောအစာစားခြင်းနှင့်နောက်ကောင်းသောအချက်မှာ ခန္ဓါကိုယ်လှပခြင်းဖြစ်သည်။ လူအတော်များများက အသီးအရွက်စားရုံမျှဖြင့်ကျန်းမာစွာဝိတ်ကျနိုင်သည်။ အသားရှောင်ခြင်းဖြင့် ကယ်လိုရီလဲသက်သာစေပြီး အာဟာရလုံလောက်စေသည်။ အသီးအရွက်စားသူများက အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် တောက်လျောက်ဗိုက်ဆာနေလိမ့်မည်ဟုတွေးကောင်းတွေးနိုင်သည်။ ထိုအရာကမှားသည်။ အမေရိကန် အစားအသောက်ပညာရှင်အဖွဲ့က ကောင်းမွန်စွာရေးဆွဲစားသောအစားအသောက်က အာဟာရပြည့်ဝစေရုံမျှမက အသက်အရွက်မျိုးစုံအတွက်သင့်တော်သည်။ ကျန်းမာခြင်း ရောဂါနည်းခြင်း ရှိသောရောဂါကိုကောင်းစွာထိန်းနိုင်ခြင်းတို့ အသီးအရွက်စားသူတွင်ရနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ခန်းလုပါကပိုကျန်းမာလာပြီး အသားအရည်လှခြင်း အင်အားပိုရှိခြင်း ဆံပင်ပိုကောင်းခြင်းတိုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
များသောများဖြင့် အသီးအရွက်စားသူဖြစ်ရန် အသား ငါး နို့ထွက်ပစ္စည်းရှောင်ရန်သာလိုအပ်သည်ဟုထင်ရသည်။ သိသာစွာ အဓိကအစာတွင် အသားနှင့်အသာနှင့်ပတ်သတ်သောထုတ်ကုန်များမပါရပါ။ သို့သော် အသီးအရွက်စားသူအစာတွင် ပုံစံသင်ထင်တာထက်ရျိသေးသည်။ အသီးအရွက်စားသူပုံစံ ကိုသူစားသည့် မစားသည့်အစာအပေါ်မူတည်ပြီးခွဲထားသေးသည်။ ဥပမာ
ပကာတာရီးယန်းသည် အသား နို့ထွက်ပစ္စည်း ကြက်ဥမပါသော်လည်း ငါးစားသည်။
ပိုလိုတားရီးယန်းသည် အသား နို့ထွက်ပစ္စည်း ငါးမစားသော် လည်း ကြက်ငှက်စားသည်။
လက်တိုအိုဗိုအသီးအရွက်စားသူက နို့ထွက်ပစ္စည်း ကြက်ဥနှင့် အသီးအရွက်သာစားသည်။
လတ်တိုအသီးအရွက်စားသူက နို့ထွက်ပစ္စည်းသာစားပြီး ကြက်ဥမစားပါ။
အိုဗိုအသီးအရွက်စားသူက ကြက်ဥသာစားပြီး နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်မစားပါ။
သိသာစွာ အသီးအရွက်သည် ရောဂါတော်တော်များများကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေသည်။
Diet Meal Plans. http://www.eatingwell.com/nutrition_health/weight_loss_diet_plans/diet_meal_plans. Accessed November 6, 2016.
Nutrition and healthy eating. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/vegetarian-diet/art-20046446. Accessed November 6, 2016.
Becomingavegetarian. http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/becoming-a-vegetarian. Accessed November 6, 2016.